Daawo Sawirada:- Safiirka Mareykanka oo madaxda Soomaalida ugu yeertay xarunta Xalane - Hablaha Media Network
Daawo Sawirada:- Safiirka Mareykanka oo madaxda Soomaalida ugu yeertay xarunta Xalane
HMN:- Danjiraha cusub ee Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya Stephen Schwartz oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa bilaabay kulamo gooni gooni ah oo uu la yeelanayo madaxda Soomaalida iyo murashaxiinta u tartamaysa xilka Madaxweyne ee dalka. waxaa kulamadii u horeeyay uu la yeeshay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid, Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari, Madaxweynaha Galmudug C/kariin Guuleed iyo Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sh, Axmed oo murashax ah.
Kulamadaan oo looga hadlayo arrimaha doorashada la filayo in 30 November ka dhacdo Muqdisho iyo sidii aysan dib ugu dhici laheyn waqtigii loo cayimay.
Maalinta beri ayaa la filayaa in Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud uu isna iska xaadiriyo xarunta Xalane oo inta badan madaxda Soomaalida looga yeero, maadaama saraakiisha Mareykanka iyo reer galbeedka ay ugu yeeraan madaxda Soomaaliya, iyadoo arintaasina ay u yeelayaan arrimo amaan awgood.
Tallaabada saraakiisha Mareykanka iyo reer Galbeedka ay ugu yeeraan madaxda Soomaalida ayaa qeyb ka ah bahdilaada ay kula kacaan madaxda Soomaalida oo arintaasi aysan ka dhiidhin.